RAR Gadzira Chishandiso. RAR Kudzorera Software. Repair RAR Mafaira.
DataNumen RAR Repair ndiro yakanakisisa RAR kugadzirisa uye kugadzirisa chishandiso pasi. Inogona kugadzirisa yakaora RAR matura uye dzore yakawanda yedata rako sezvinobvira, nokudaro uchideredza kurasikirwa mufaira huori.
Sei DataNumen RAR Repair?
Kudzoreredza mwero ndiyo most kukosha kwakakosha kwe RAR kupora chigadzirwa. Zvinoenderana nemiedzo yedu yakazara, DataNumen RAR Repair ine yakanakisa kupora mwero, zvirinani kupfuura chero vamwe vakwikwidzi, kusanganisira WinRAR nezvimwe RAR maturusi ekugadzirisa, mumusika!
Dzidza zvakawanda nezvekuti sei DataNumen RAR Repair inoputa kukwikwidza
Ini handina kana matambudziko neichi chinoshamisa progremm. Izwi kune avo vanhu vanogona kunge vakave nemamwe matambudziko. Kana iyo 'DataNemen Rar Kugadzirisa 'Chirongwa
Gunyana 6, 2014
Ndingangodarika kufara kusiya feed-back zvine chekuita neyangu yakanaka kubatanidzwa kwechigadzirwa chako _ mamwe mazano zvakare sekukanganisa chaiko
Kana iwe uchida kutsigira kuongororwa kwangu kwechigadzirwa nechero ruzivo rwangu pachezvako unogona kungozvigumira kudunhu _ 'United Kingdom'. Ndatenda
Zvinhu Zvikuru mu DataNumen RAR Repair v3.5
Tsigiro yekugadzirisa ese mavhezheni e RAR uye maSFX mafaera.
Tsigiro yekudzosera yakawanda-vhoriyamu uye yakasimba dura.
Kutsigira kudzoreredza zvakachengetedzwa ne password.
Tsigiro kuti uwane uye sarudza iyo RAR uye SFX matura ekuchengetedza pane komputa yemuno.
Kutsigira kugadzirisa RAR mafaira pane zvakashata midhiya, senge floppy disks, Zip disks, CDROMs, nezvimwe.
Tsigiro yekugadzirisa batch ye RAR uye maSFX mafaera.
Kutsigira kugadzirisa RAR matura akakura se8, 388, 608 TB (kureva 8, 589, 934, 592 GB).
Tsigira kusangana neWindows Explorer, kuti ugone kugadzirisa RAR kuchengetedza pamwe nemenu yemamiriro eWindows Explorer zviri nyore.
kushandisa DataNumen RAR Repair Kudzoreredza Zvakakuvara RAR Archive
Kana zvako RAR Archive yakakuvadzwa kana yakashata nekuda kwezvikonzero zvakasiyana uye haugone kuivhura zvakajairika, unogona kushandisa DataNumen RAR Repair kuongorora iyo RAR archive uye dzosa mairi mairi sezvazvinogona.
Cherechedza: Usati wadzorera chero chakakuvara kana chakaora RAR archive ne DataNumen RAR Repair, ndapota vhara WinRAR uye chero mamwe mashandiro anogona kuwana iyo RAR Archive.
Sarudza iyo yakakuvara kana yakashata RAR dura rekugadziriswa:
Unogona kuisa iyo RAR Archive zita zvakananga kana tinya bhatani rekutarisa uye sarudza iyo yekuchengetedza. Iwe unogona zvakare kudzvanya iyo bhatani kuti uwane iyo RAR dura rekugadzirisa pane komputa yemuno.
By default, DataNumen RAR Repair achapora uye kubvisa mafaira mu RAR Archive mune dhairekitori inonzi xxxx_recovered, iko xxxx ndiro zita renyanzvi RAR Archive. Semuenzaniso, for source RAR archive Damaged.rar, iyo default kuburitsa dhairekitori ichave Yakakuvara_kuwanikwazve. Kana iwe uchida kushandisa rimwe zita, ndokumbira usarudze kana kuriseta saizvozvo:
Iwe unogona kuisa zita rekuburitsa zita zvakananga kana kubaya iyo bhatani rekutarisa uye sarudza dhairekitori.
Baya bhatani, uye DataNumen RAR Repair kuda start kuongorora uye kugadzirisa sosi RAR faira. Kufambira mberi kubhawa
Mushure mekugadzirisa maitiro, kana iri sosi RAR faira rinogona kugadziriswa zvinobudirira, iwe uchaona iro meseji bhokisi rakadai.
Iye zvino unogona kuvhura dhairekitori rekuburitsa rakatsanangurwa mudanho rechitatu uye tarisa iwo akadzorerwa mairi mairi.
DataNumen RAR Repair 3.5 inoburitswa muna Chivabvu 3, 2021
DataNumen RAR Repair 3.2 inoburitswa muna Zvita 18, 2020
DataNumen RAR Repair 3.0 inoburitswa munaNovember 4th, 2020
DataNumen RAR Repair 2.9 inoburitswa munaGunyana 9th, 2020
Kuvandudza kugadziriswa kwetemporary mafaera.
DataNumen RAR Repair 2.8 inoburitswa muna Kubvumbi 19, 2020
Natsiridza kupora chaiko uye chiyero chekupora
DataNumen RAR Repair 2.7 inoburitswa munaNovember 18th, 2019
DataNumen RAR Repair 2.6 inoburitswa muna Chikunguru 24th, 2019
DataNumen RAR Repair 2.5 inosunungurwa munaJune 28, 2018
DataNumen RAR Repair 2.3 inoburitswa muna Kubvumbi 20, 2018
Natsiridza kupora kweakavharidzirwa RAR matura.
DataNumen RAR Repair 2.2 yakaburitswa muna Sep 19, 2016
DataNumen RAR Repair 2.1 yakaburitswa munaGunyana 14, 2013
DataNumen RAR Repair 2.0 yakaburitswa muna Chikunguru 6, 2013
Tsigira KukundaRAR v5.x.
Nyorazve mushandisi interface.
DataNumen RAR Repair 1.2 yakaburitswa muna Sep 27, 2006
Kutsigira kurodha huori RAR kana SFX zvinyorwa kune yedu ftp server.
Tsigiro yekudzosera madhairekitori mu RAR matura.
Natsiridza iko kukanganisa kugadzirisa mashandiro.